नौ रुपैयाँको नुनको मूल्य ६० रुपैयाँ !
ARCHIVE, NEWSPAPER » नौ रुपैयाँको नुनको मूल्य ६० रुपैयाँ !
रुकुम – नौ रुपैयाँको एक पोका आयोडिनयुक्त नुनको मूल्य ६० रुपैयाँ भन्ने सुन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । तर सिस्ने गाउँपालिका १ सिस्नेका बासिन्दाले प्रतिपोका नुन ६० रुपैयाँमा किन्ने गरेका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
सिस्नेमा पाँच गाउँ भएपनि ठाउँअनुसार नुनको मूल्य फरक फरक छ । ती गाउँहरुमा नुनको मूल्य ४५, ५०, ५५ र ६० रुपैयाँ छ । भौगोलिक विकटताले सडकको पहुँच नहुँदा ढुवानी भाडा महँगो पर्ने भएकाले नुनको मूल्य महँगो पर्न गएको व्यापारीहरु बताउँछन् ।